Champions League: Isku Aadka Jimcaha, saadaasha iyo Toddobaad Kadib Oo La Ciyaari Doono
HomeChampions LeagueChampions League: Isku Aadka Jimcaha, saadaasha iyo Toddobaad Kadib Oo La Ciyaari Doono
Xaflad ballaadhan oo lagu qaban doono magaalada Nyon oo ay ka qayb geli doonaan xidhiidhka kubadda cagta ee Yurub, saraakiil ka socota FIFA, kooxaha Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich iyo Juventus ayaa loogu qori tuuri doonaa afartaas kooxood, halkaas oo laba iyo laba la isugu beegi doono.
Xafladdan oo dhici doonta marka ay saacadda bariga Afrika tahay 12:PM ama Duhurka wakhtiga Salaadda Jimcaha ayaa waxa loogu qori tuuri doonaa afarta kooxood ee Real Madrid, Barcelona, Juventus iyo Bayern Munich.
Real Madrid: waxay 1-0 dirqi ah kaga badisay Atletico Madrid habeenkii xalay, waxaanay u gudubtay wareegga semi-finalka ama afarta kooxood ee ugu dambeeya. Waa kooxda haysata koobkan loo tartamayo, waxaanay dedaal ugu jirtaa in ay difaacato oo ay markii labaad oo xidhiidh ah ku guuleysato. Sannadkan waxay u tahay markii shanaad oo xidhiidh ah ee ay timaaddo Real Madrid semi-finalka Champions League.
FC Barcelona: Waxay guul cajiib ah ka gaadhay labadii kulan ee ay la ciyaartay PSG oo ay labadaba ku badisay 3-1 iyo 2-0, celcelis ahaanna waxay ku soo baxday 5-1. Barcelona waa markii 8aad oo xidhiidh ah ee ay halkan timaaddo, iyadoo labadii sannadood ee u dambeeyeyna ay marxaladdan oo kale ku reebeen Atletico Madrid iyo Bayern Munich.
Juventus: Babar dhac 0-0 ah oo ay la gashay Monaco iyo kulankii hore oo ay ku badisay 1-0 ay ugu soo baxday marxaladda Semi-finalka, waxaana ka muuqday dedaal badan. Juventus muddo dheer ayaa ugu dambaysay in ay marxaladdan oo kale soo gaadho, wakhtigii ugu dambeeyey waxay ahayd xili-ciyaareedkii 2002-2003.
Bayern Munich: Kooxda uu maamulo Guardiola dadka way ka yaabisay Salaasadii markii ay sida daadka ugu fatahday goolka kooxda FC Porto oo kulankii hore ka yaabisay. Bayern waxay sannadkan u noqonaysaa markii shanaad ee muddo lix sannadood gudahood ah ee ay marxaladdan soo gaadho.
Wakhtiga la ciyaari doono:
Jimcaha waxa la shaacin doonaa oo kaliya sida ay kooxuhu u wada ciyaari doonaan, sababtoo ah hore ayaa loo sii ogaa wakhtiga ciyaaruhu dhici doonaan. Marka la shaaciyo isku aadka waxay kooxuhu ku kulmi doonaan ciyaaraha koowaad 5-6 May oo ah toddobaad kaddib iyo 12-13 May, taas oo ay macnaheedu tahay in marka kooxuhu toddobaadkan nastaan ay labada toddobaad eek u xiga ciyaari doonaan.
Saadaal lagu kalsoon yahay oo laga bixiyey ma jirto, hase yeeshee waxa la calaamadiyey in ay suurtogal tahay in ay koox waliba ku dhici karto ta kale. Waxa aad loo hadal hayaa Barcelona iyo Bayern Munich in ay isku dhici karaan, ama Bayern Munich iyo Real Madrid.
Shabakadda www.cadalool.com waxay u ballan qaadaysaa akhristeyaasha in ay si toos ah uga daawan doonaan xafladda isku-aadka isla markaana saacad ka hor wakhtiga isku aadka ay shabakadda www.cadalool.com si toos ah tebinta u bilaabi doonto, iyadoo idinku xidhi doonta telefishanka ciyaaraha ee Bien Sports.
Gameiro finishes the job for Atletico Madrid